मानिस सबैभन्दा खुसी कुन उमेरमा हुन्छ ? यस्तो भन्छ अनुसन्धान - Khabar Break | Khabar Break
खुसी के हो ? यो प्रश्न तपाईंलाई सोधियो भने जवाफ दिन केही समय लाग्छ । कसैको मुहारमा आफ्नो मान्छे भेट्दा उज्यालो भेटिन्छ, कसैलाई राम्रो आम्दानी गर्न सक्दा । जसरी खुसी मिले पनि धेरैजसो मानिसहरुले यस्तो खुसी लामो समय टिकाउन सक्दैनन् ।
के तपाईंलाई थाहा छ, खुसीको सबैभन्दा ठूलो कारण के हो रु सन्तुष्टि । यही हो खुसीको सबैभन्दा ठूलो कारण । तपाईले यो शब्दलाई पुस्तकमा धेरै पढ्नुभएको होला । यो जरुर हो कि सन्तुष्टि नमिली मानिसको अनुहारमा खुसी आउँदैन । यो कुरा हामीले होइन, अमेरिकाको नेशनल ब्यूरो अफ इकोनोमिक्सले गरेको अनुसन्धानले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
हालसालै गरिएको एक अनुसन्धानले उमेरको आधारमा मानिसको खुसी घटबढ हुनसक्ने यथार्थ बाहिर ल्याएको छ । विश्वका विभिन्न ९७ देशका १३ लाख मानिसमाथि गरिएको सर्वेको निष्कर्षमा भनिएको छ– १६ देखि २० र ६५ देखि ८५ को उमेरमा मानिस सबैभन्दा खुसी हुन्छ । यसैगरी ४५ देखि ५५ उमेर समूहका मानिस सबैभन्दा कम खुसी हुन्छ ।
डेबिड जी बलैंचफ्लोर र एन्ड्रू ओसवल्डद्वारा तयार पारिएको रिपोर्टका अनुसार १६ वर्षदेखि १८ वर्षमा मानिस सबैभन्दा बढी खुसी हुन्छ । यसैगरी ५० वर्षको उमेरमा मानिसको जीवनबाट खुसी लगभग गायव हुन्छ । यो रिपोर्टमा संसारका सातवटा ठूला सर्वेका निष्कर्षलाई समावेश गरिएको छ ।
मध्यम उमेरमा खुसी कम हुनुको कारण सन्तुष्टिको अभाव नै हो । आम्दानी र स्वास्थ्यले पनि मानिसलाई यो उमेरमा बढी सताउँछ । मध्यम उमेरमा जागिरको चिन्ता र परिवारलाई कम समय दिन पाइने भएकोले पनि खुसी कम हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
तपाईको खुसीलाई अरुले होइन, केवल तपाईले नै प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो तुलना अरु कसैसँग गर्नुको कारण तपाईको दुःख । यसको साथै चाहेको कुरा नपाउँदा र आफ्नो विगत र भविष्यको बारेमा बढी सोच्नाले पनि मानिस दुःखी हुने रहेछ । आफ्नो कामको मूल्यांकन आफैं गर्दा पनि तपाईको खुसी टाढा हुनसक्छ ।
अनुसन्धानदाताहरुले संसारमा विशेष ट्रेन्ड्सका अनलाइन अध्ययन गरेका थिए । साथसाथै सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुको रिपोर्टहरुलाई पनि अध्ययन गर्नुका साथै प्रत्यक्षरुपमा मानिसहरुलाई प्रश्न पनि सोधेका थिए ।